ငါသညျတရပေူစမျးယူလို | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ငါသညျတရပေူစမျးယူလို
Updated: 2016-08-19 18:41
တောအုပ်ငယ်နံဘေးတွင် ပြုလုပ်ထားသော ရေပူစမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝအလျှောက်ထွက်ရှိနေသော ယူနိုဟနများလည်းရှိနေသောကြောင့် ရေပူစမ်းစိမ်လိုက်သည်နှင့် အသားအရေများချောမွေ့လာစေနိုင်ပါတယ်။ ရာသီ...
Updated: 2016-08-17 09:39
ဟိရရာမရေပူစမ်းဟာ ခုမမိုတိုခရိုင်၊ မိက၀အနီးရှိ ရာမဂကျေးရွာတွင်တည်ရှိပါတယ်။ ခတိုခိုရမဆက အရေပြားရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေသော ရေပူစမ်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်ဟု မိန့်ဆိုခဲ့ရာမှ ဆေးဘက်ဝင်...
Updated: 2016-08-17 09:38
ခုရိုခ၀ရေပူစမ်းဟာ ရှေးခေတ်ပေါင်းများစွာကဆောက်လုပ်ခဲ့သော ဂျပန်စတိုင်တည်းခိုခန်းများ၊ ချုခုဂိုမြစ်တစ်လျှောက်တွင်ရှိသော အောက်ဒိုးရေပူစမ်းများဖြင့် ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ ရေပူစမ်း...
Updated: 2016-08-01 14:23
Kirishima onsen ( ခိရိရှိမား အွန်းစမ်း ရေပူစမ်း )
မြူပင်လယ် ကြားထဲမှာ တောင် ကုန်း လေး က မျော နေသယောင် ကျွန်းလေး တွေ ကတည်ရှိ တဲ့ အတွက် မြူကျွန်း ( ခိရိရှိမား) လို့ခေါ်ဆို လာပါတယ်။ တောင်တန်း တွေ အတွင်း က သဘာဝအလှတွေ ကြား မှာ တည် ရှ...
Updated: 2016-07-07 13:49
ခန်းခိုင်းဂျိ အွန်းစမ်း ( အိုးအိတ ရေပူစမ်း )
ရေပူစမ်း အနေ နဲ့ တွေ့ ရှိ ခဲ့ တာကတော့ ခါမာခူရာ ခောတ် မှာ ဖြစ် ပြီး အယ်ဒို ခောတ် မှာ ( ခန်းကိုင်းဂျိ ရေပူစမ်း က သွား ရတာ ခက် ပေမယ့် ရှု ခင်း တွေ က တော့ အရမ်း လှတယ် ) လို့ ဘွန်းဂေါကိုခုရ...
Updated: 2016-05-24 16:52
အိရောခုနိ ကျောက် စာမှာ ( ဟရမိ နော့ ယု ) ဆို ပြီး တော့ ထွင်း ထု ထား ပြီး တော့ အယ်ဒိုခောတ် မှာ နာ မည် ကျော် ကြား ခဲ့ ပါတယ်။ မဲဂျိ ခောတ် ကို ရောက် ပြီး တော့ ဘဲ့ပု ဆိပ် ကမ်း ဆောက် လုပ် ရေး ၊ နိပိုး မိန်း...
Updated: 2016-03-29 13:20
ခမဲ ဂ၀ အွန်း စမ်း
အဲ ဒို ခောတ် ရဲ့ ခောတ် မှီ တဲ့ နိုင်နိုင် တော် ကို အစွဲ ပြု ပြီး တော့ ( စာတိုးရ မှာ ရေပူစမ်း ရှိ တဲ့ အတွက် စာတိုး ရ ရွာ ကို ခါမဲ ဂ၀ ရွာ ဆို ပြီး သမုတ် ခဲ့ ) ဆို ပြီး တော့ မှတ်သား ရ ပါ ပြီး ကမ်း ရိုး...
Updated: 2016-03-18 11:37
Unzen ဟာ အရင် စော စော ကတည်း က ဥရော ပနိုင် ငံ တွေ ဆီ မှာတောင်နံ မည် ကြီး တဲ့ နေရာ တစ် ခု ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ ရှောဝ ၉ နှစ်မှာ ပထမဆုံး နိုင်ငံ့ ပန်းခြံ အဖြစ် သတ် မှတ် ခံ ခဲ့ ရပါတယ်။ Unzen ရဲ့ ကြွယ်ဝလှတဲ့ သဘ...
Updated: 2016-03-18 11:17
ကန်းန၀ အွန်း ဆန်း
ဟတ်ချိယု ထဲ မှာ ရေပူစမ်း မှန်း တန်း ပြီး သိ သာ တဲ့ ကန်း န၀ အွန်း ဆန်း မှာ ညက်ညော လှ တဲ့ ရေနွေး ငွေ့ လေး တွေ က လွင့် ပြန် နေ ပြီး ၊ တကယ့် ကို နာမည် ကြီး ဘဲ့ပု ကို မြင်ယောင် မိတဲ့ အလှ တရားပဲ ဖြစ် ပါ တယ်...
Updated: 2016-03-17 16:19
တာခဲအို အွန်း ဆန်း တာ ၀ါ ဂိတ်
တာခဲ အို အွန်းဆန်း ရဲ့ စံနမူနာ လို့ ပြောရ ရင် ၊ရရူးမီရဂျိ ကို တွေး စေနိုင်တဲ့အနီယောင် ချယ်ရီတံ ခါး ကြီး ။ အဲ့ တံခါး ကြီး ဟာ အနီ ရောင် အုတ် တွေထုတ် လုပ် တဲ့ တို ကျို ဘူတာ ကို တည် ဆောင် ခဲ့ တဲ့ ခါ...